Ngwaahịa ndị na-emepụta ihe na ndị na-ebubata ya - Productslọ ọrụ Ngwaahịa China
Aluminium CNC igwe Parts
Aluminium CNC agbanye Components
EDM Ngwa Ngwa
Igwe anaghị agba nchara CNC machining
Aluminium Alloy Die Nkedo
Zinc Alloy Die Nkedo
Ọgwụ Ebu Parts
Stamping Parts Uru Ebe ọ bụ na a na-arụ ọrụ nhazi oge na ụlọ okpomọkụ, a na-akpọ ya stampụ oyi. Stamping akpụ bụ otu n'ime usoro nhazi nrụgide ọla. Ọ bụ ihe eji emepụta teknụzụ injinia nke dabere na teknụzụ nrụrụ ọla. Ngwongwo maka nhazi stampụ bụ akwụkwọ ma ọ bụ warara, ya mere a na-akpọkwa ya mpempe akwụkwọ. (1) The akụkụ ziri ezi nke zọ akụkụ na-ekwe nkwa site ebu, na nwere otu ihe ahụ ...
Dị ka a na-eduga plastic injection ebu China onye rụrụ, anyị specializes na-eme dị iche iche plastic injection ebu maka akpakanamde, n'ụlọ ngwa, ọgwụ na ahụ ike na ngwá, ngwá electronic na egwuregwu na ngwá, nakwa dị ka izugbe ulo oru OEM ngwa. Anyị ụlọ ọrụ na-ekpuchi ebe ihe karịrị 3,800 square mita omumuihe, gbara ya gburugburu na-adaba adaba njem. Ka ọ dị ugbu a, otu anyị ruru ihe karịrị 150 ezigbo ndị ọrụ ngwa ọrụ dị na china na akụ akụ karịa 15 nde RMB. Ike anyị bụ ...
Die casting Gịnị bụ anwụ-mgbatị? Pressure mgbatị a na-akpọ anwụ mgbatị Die-mgbatị usoro nke a wụrụ awụ alloy mmiri mmiri wụsara n'ime a mgbali ụlọ, a oghere nke a ígwè ebu na-ejupụta na a elu na-agba, na alloy mmiri mmiri na-sikwuo ike nrụgide na-etolite a mgbatị. Uru na ọghọm nke nkedo ịnwụ anwụ: Uru: ezigbo mma ịdị elu na-arụpụta ezigbo ọnụ ahịa ọghọm: akụrụngwa naanị aluminom zinc magnesium na-eduga ọla kọpa nwere ike iji mee ya. Expe ...
Ahaziri aghụghọ nabatara. OEM / ODM iwu anabatara. Anyị na-ekwu okwu na ngwaahịa dịka ndị ahịa anyị ma ọ bụ nbipụta. Biko kpọtụrụ anyị kpamkpam dị ka ezigbo enyi ma ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ngwaahịa na ọrụ anyị. Omenala elu nkenke anwụ n partsfe akụkụ akpụzi ebu ma na-eme Type Single uji eze / muti-uji eze maka otu akụkụ / ezinụlọ oghere 2-3 dochie ebu maka na-agbanwe ihe onwunwe SKD61, H13, Dievar, QDN, 8407, 2234V, TQ1, 2343, 45 # Steel , wdg akụkụ Kwekọrịta ...
Obere Order CNC Lathe Machine agbanye ịbịaru High nkenke akụkụ ahụ mapụtara aha , aja ọgbụgba ọkụ, mirror-polishing, wdg Asambodo ISO9001, SGS, TS16949, ROHS Usoro mbịne, egwe ọka, mkpọpu ala, egweri, polishing na na; Business akporo CNC machining, mgbatị, ọ ...
Nkenke CNC machining anaghị agba nchara akụkụ nkọwa: Product Name: Dongguan Custom nkenke igwe anaghị agba nchara Metal CNC Turning Parts Ihe: igwe anaghị agba nchara, aluminom, ọla, ígwè, ọla kọpa, plastic, wdg Mkpa Ọgwụgwọ: anodizing, mpe mpe akwa-obibi akwụkwọ, electroplating, sere, mirror -polishing, wdg Asambodo: ISO9001, SGS, TS16949 Usoro: mbịne, -egwe ọka, mkpọpu ala, egweri, polishing na na; Business akporo: CNC machining, plastic prototyping, plastic ịkpụzi Nzipu: 7-15 ụbọchị mgbe ...
A na-ejikarị akụkụ ndị na-arụ ọrụ CNC maka ọrụ ndị chọrọ ka a na-ewe ọtụtụ ọtụtụ akụkụ. Site na plastic na metal, site na obere iji nweta mkpa mmepụta ma ọ bụ dịka njikọ njikọta n'etiti atụmatụ echiche na nrụpụta zuru ezu, yana otu iwu tupu ị nweta iwu na ọnụọgụ omenala Ihe Njirimara Ihe Igwe, ígwè alloy, ọla kọpa, igwe anaghị agba nchara, wdg. . Mee ka M2-M36 dị. Ọrụ OEM, imewe, ahaziri Mkpa ọgwụgwọ Passivation ...
EDM machining Akụkụ Ihe ndabere Usoro EDM dị mfe nke bụ ihe ọkụ eletrik na-eke n'etiti ọkụ ọkụ na ihe ọ bụla na-eduzi ọkụ eletrik, ọ na-emetụtakarị ụfọdụ isi ihe dị mgbagwoju anya, ebu ebu plastik, ịkpụ na obere mpaghara, wdg, ụlọ ọrụ anyị ike workpieces bụ ruo 16 sentimita asatọ oké, na taper akụkụ ruo 30+ degrees, Anyị nwere ike ijikwa akụkụ ruo 25,6 "x 16" x 17,75 ″ workpieces. Anyị mma waya ọnwụ nwere ike na-emepụta ezi shapes na nkuku ruo .001 ”wi ...
CNC Turning Parts CNC Anyị CNC lathes na-eme ka nnukwu ọsọ na ntụgharị dị elu nke plastik na ọla. Usoro ntụgharị na-enye ohere maka geometries ndị dị mgbagwoju anya na oghere dị n'ime ime. Anyị mbịne ike dị maka onye-offs site na ogbe mmepụta nke gị mmiri. Ọzọkwa gbanye-egwe ọka onyinye igwe na ngwá ọrụ ụlọ elu na elu arụmọrụ. Uru nke igwe na-egwe ọka (1) Na-ebelata usoro nhazi ngwaahịa ma melite arụmọrụ mmepụta. Tur ...
Gịnị mere họrọ anyị: 1.We bụ a factory na ihe karịrị afọ 20 cnc machining ahụmahụ. 2.A na-ebute 95% nke ngwaahịa anyị na USA / Canada / Australia / UK / France / Germany / Bulgaria / Poland / Italia / Netherlands… Akwadoro Ogo. 3. A na - azụta imirikiti igwe anyị site na USA na Japan dị ka akara HAAS (axis 3, 4-asxis cnc igwe), Nwanna, TSUGAMI (igwe ntụgharị ntụgharị 6), Miyano na ndị ọzọ. otú anyị nwere ike ime ka elu kpọmkwem akụkụ dị ka gị ndidi chọrọ. 4 ....